Simba reMunhu-Munhu | Martech Zone
Makore mashoma apfuura, isu taive nemusangano nevamwe vebhodhi kuCisco kuburikidza telepresence uye hapana chaishamisa pakushamisika. Kutaura kune mumwe munhu izere-saizi uye kumeso-kumeso kune kwakakosha kukosha. Ivo vanhu veCisco vanobvumirana uye vakaburitsa izvi infographic pasimba remasangano-emunhu.
Zvinodikanwa zvemusika wakaparadzirwa wepasirese zvakashandura nzira iyo masangano anotaurirana nevavanoshanda navo, vatengesi / vadyidzani, uye vatengi vanogona kupatsanurwa nenzvimbo refu. Ongororo yepasirese yakaitwa neThe Economist Intelligence Unit, yakatsigirwa neCisco, yakaongorora mafungiro evatungamiriri vebhizimusi makumi masere neshanu nezve kukosha kwemisangano-yemunhu uye zvainoita pane anopfuura makumi matatu mabhizinesi maitiro. Saka, chii mutongo? Iko-mumunhu kutaurirana kune simba sekufunga kwedu?
Iyo infographic inomiririra mhedzisiro kubva ku Ongororo yepasi rose yakaitwa neThe Economist Intelligence Unit, inotsigirwa neCisco, iyo yakayedza 862 vatungamiriri vebhizimusi manzwiro nezve kukosha kwemisangano ye-mu-munhu uye kukanganisa kwavo pane anodarika makumi matatu mabhizinesi maitiro.
Tags: ciscokutaurirana-munhuKushambadzira VhidhiyoTechnologytelepresence
Issuu: Chishandiso chekushambadzira, Kwete Magazini chete
Pfungwa yakanaka Doug! Ichi ndicho chikonzero ini handifi ndakatadza kuramba musikana scout cookies :).
Pfungwa iyi zvakare inopindirana neGuy Kawasaki's 4 mbiru dzeuroyi. Mumunhu ane simba, asi iwe unofanirwa kuve wakafanana, wakavimbika, wakasiyana, nezvimwe.